RFID သားရေ Key ကို Chain, RFID သားရေ Key ကို Ring ကို, RFID သားရေ Key ကို Fobs, NFC Leather Key Chain, NFC Leather Key Ring, NFC Leather Key Fobs
RFID သားရေ Key ကို Chain, RFID သားရေ Key ကို Ring ကို, RFID သားရေ Key ကို Fobs
Keychain NFC Leather Key Chain, NFC Leather Key Fobs, NFC Leather Key Ring, RFID သားရေ Key ကို Chain, RFID သားရေ Key ကို Fobs, RFID သားရေ Key ကို Ring ကို
ဆက်သွယ်ရေးပရိုတိုကော: ISO ကို 18000-2, ISO ကို 11784/11785, ISO ကို 14443A, ISO ကို 15693, ISO ကို 18000-6C
R / W ကိုအကွာအဝေး: 5-10စင်တီမီတာ, 30cm မှတက်လှိုင်းနှုန်းသည် UHF (စာဖတ်သူကိုအာဏာနှင့်အင်တင်နာအရွယ်အစားနှင့်အသုံးပြုမှုပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်အခြေခံပြီး)
အလုပ်လုပ်အပူချိန်: -20ကို C ~ + 55 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဒီဂရီ
အရောင်ရွေးချယ်မှုများ: အနက်ရောင်, ဝါသော, ပြာသော, အနီေရာင်, စသည်တို့ကို.
The RFID Leather Keychain isakey chain withaleather embedded RFID chip. Withavariety of shapes, can screen printing LOGO or pattern, UID ကုဒ်, Anti-တုန်ခါမှု, dust-proof, there are dozens of shapes can choose.
Various types of chips can be packaged: EM4100, EM4102, Mifare 1k S50, Mifare S70 4K, NXP ULtralight, NTAG203, ST176, T5557, T5577, T88RF256, TK4100, FM11RF08, INSIDE, LEGIC min 256, ဂြိုလ်သား h3, Impinj Monza4and others.
The appearance of small and exquisite, stylish and beautiful, ကြာရှည်ခံသော, can be hung on the key chain, သယ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူသော, do not fade.
Can print ID code, အမှတ်စဉ်နံပါတ်. Screen printing or laser engraving LOGO and pattern.
အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်မယ်, Time attendance Control, ဝင်ခွင့်လက်မှတ်, Logistics, Industrial Automation, Skating, လက်မှတ်တွေ, Token, Members, Public Transport, Electronic Payments, Animal Tracking, One Card Systems, Catering, Swimming Pools, လြျှောဖှတျရနျစရာ, Massage Centers, Concerts, Sports competitions and Events, night clubs and other entertainment centers.
I am interested in your product RFID Leather Key Chain, RFID သားရေ Key ကို Ring ကို, RFID သားရေ Key ကို Fobs
prev: T5577 ဟိုတယ် Keychain, T5577 Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Keychain, T5557 ဟိုတယ် Key ကို Ring ကို, T5567 Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Key ကို Fobs
နောက်တစ်ခု: LED မီးနှင့်အတူ RFID Keychain, LED မီးနေရောင်ခြည် NFC ကို Keychain
PROXKEYⅡ Keychain HID, HID 1346 Keychain